ခံစားချက်ပြပုံတွေကပြောပြပေးမယ့် လက်တလောသင်ကြုံတွေ့ရမယ့်အရာများ..... - Barnyar Barnyar
May 30, 2022 thanzin laypyay Uncategorized 0
သင့်အနေနဲ့ လက်တလော ဘယ်လိုအရာတွေကို ကြုံတွေ့ရမလဲဆိုတာ သိချင်ပါသလား?
ဒီနေ့မှာတော့… စိတ်ခံစားချက်ကိုပြသပေးနေတဲ့ ပုံလေးတွေကို ဖော်ပြပေးထားမှာဖြစ်ပြီး သင်အနှစ်သက်ဆုံးပုံတစ်ပုံကို ရွေးချယ်ပြီး လက်တလော သင်ကြုံတွေ့ရမယ့်အရာတွေကို လေ့လာကြည့်လိုက်ရအောင်နော်။
( ၁ ) မျှော်လင့်ချက် ( HOPE )
သင်ကြိုးစားခဲ့တဲ့အရာတွေအတွက် အောင်မြင်မှုရရှိဖို့ အချိန်နည်းနည်းပဲ လိုပါတော့တယ်။ ဒါကြောင့် အခုချိန်မှာ သင့်အနေနဲ့ သင်ကြိုးစားခဲ့တဲ့အရာတွေကို ဘယ်လိုအခက်အခဲပဲရှိနေရှိနေ လက်မလျော့ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
ဘာလို့လဲဆိုတော့… သူတို့က မကြာခင်အချိန်အတွင်းမှာ သေချာပေါက် အောင်မြင်လာမယ့်အရာတွေ ဖြစ်နေလို့ပါ။ ဒါပေမယ့် ရည်မှန်းချက်တွေအောင်မြင်ဖို့ ကြိုးစားရမယ်ဆိုပေမယ့်လည်း သင့်အနေနဲ့ အပြည့်အဝအနားယူဖို့ကလည်း လိုအပ်ပြန်ပါသေးတယ်။ ဒါကြောင့် အနားယူဖို့ မတွန့်ဆုတ်နေပါနဲ့။
( ၂ ) ယုံကြည်မှု ( BELIEVE )
သင့်အနေနဲ့ အခုချိန်မှာ အကောင်းဘက်ကနေ အရာအားလုံးကို စဉ်းစားဖို့ လိုအပ်နေပါတယ်။ ဒီအချိန်က သင့်ရဲ့ဘဝရည်မှန်းချက်တွေကို စဉ်းစားဖို့အကောင်းဆုံး အချိန်ပါပဲ။ သင့်အနေနဲ့ အခုလက်ရှိနေနေရတဲ့ နေရာမှာ မပျော်လို့ ပြောင်းလဲမှုတွေလုပ်ချင်ပါသလား? ဒါမှမဟုတ် ဘဝမှာ ကြီးမားတဲ့ပြောင်းလဲမှုကြီးလုပ်ဖို့ စဉ်းစားနေပါသလား?
ဒီအချိန်က သင့်အတွက် ပြောင်းလဲမှုတွေ လုပ်ဆောင်ဖို့ အကောင်းဆုံး အခြေအနေပါ။ ဒီပြောင်းလဲမှုတွေအတွက် ကောင်းသောအကျိုးရလဒ်တွေကိုလည်း သေချာပေါက်ခံစားရမှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် အခုချိန်က ပြောင်းလဲမှုတွေ လုပ်ဆောင်ဖို့ အကောင်းဆုံးအခြေအနေပါ။
( ၃ ) ချစ်ခြင်းတရား ( LOVE )
ဒီအချိန်က သင့်အတွက် အချစ်ရေးကံအကောင်းဆုံး အချိန်အခါပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သင့်မှာ ချစ်သူမရှိသေးဘူးဆိုရင် အခုအချိန်က သင့်အတွက် ချစ်သူရဖို့ အခွင့်အရေးတွေ အများကြီးရှိနေပါတယ်။
ဒါကြောင့် ချစ်သူထားဖို့စဉ်းစားထားရင် အခုချိန်က ထားဖို့အကောင်းဆုံးအချိန်ပါပဲ။ ချစ်သူရှိပြီးသားဆိုရင်လည်း သင်တို့နှစ်ယောက်က လက်တလောမှာ သာယာပျော်ရွှင်တဲ့အချစ်ရေးလေးကို ပိုင်ဆိုင်ထားရမှာပါ။Credit
သငျ့အနနေဲ့ လကျတလော ဘယျလိုအရာတှကေို ကွုံတှရေ့မလဲဆိုတာ သိခငျြပါသလား?
ဒီနမှေ့ာတော့… စိတျခံစားခကျြကိုပွသပေးနတေဲ့ ပုံလေးတှကေို ဖျောပွပေးထားမှာဖွဈပွီး သငျအနှဈသကျဆုံးပုံတဈပုံကို ရှေးခယျြပွီး လကျတလော သငျကွုံတှရေ့မယျ့အရာတှကေို လလေ့ာကွညျ့လိုကျရအောငျနျော။
( ၁ ) မြှျောလငျ့ခကျြ ( HOPE )
သငျကွိုးစားခဲ့တဲ့အရာတှအေတှကျ အောငျမွငျမှုရရှိဖို့ အခြိနျနညျးနညျးပဲ လိုပါတော့တယျ။ ဒါကွောငျ့ အခုခြိနျမှာ သငျ့အနနေဲ့ သငျကွိုးစားခဲ့တဲ့အရာတှကေို ဘယျလိုအခကျအခဲပဲရှိနရှေိနေ လကျမလြော့ဖို့ လိုအပျပါတယျ။
ဘာလို့လဲဆိုတော့… သူတို့က မကွာခငျအခြိနျအတှငျးမှာ သခြောပေါကျ အောငျမွငျလာမယျ့အရာတှေ ဖွဈနလေို့ပါ။ ဒါပမေယျ့ ရညျမှနျးခကျြတှအေောငျမွငျဖို့ ကွိုးစားရမယျဆိုပမေယျ့လညျး သငျ့အနနေဲ့ အပွညျ့အဝအနားယူဖို့ကလညျး လိုအပျပွနျပါသေးတယျ။ ဒါကွောငျ့ အနားယူဖို့ မတှနျ့ဆုတျနပေါနဲ့။
( ၂ ) ယုံကွညျမှု ( BELIEVE )
သငျ့အနနေဲ့ အခုခြိနျမှာ အကောငျးဘကျကနေ အရာအားလုံးကို စဉျးစားဖို့ လိုအပျနပေါတယျ။ ဒီအခြိနျက သငျ့ရဲ့ဘဝရညျမှနျးခကျြတှကေို စဉျးစားဖို့အကောငျးဆုံး အခြိနျပါပဲ။ သငျ့အနနေဲ့ အခုလကျရှိနနေရေတဲ့ နရောမှာ မပြျောလို့ ပွောငျးလဲမှုတှလေုပျခငျြပါသလား? ဒါမှမဟုတျ ဘဝမှာ ကွီးမားတဲ့ပွောငျးလဲမှုကွီးလုပျဖို့ စဉျးစားနပေါသလား?
ဒီအခြိနျက သငျ့အတှကျ ပွောငျးလဲမှုတှေ လုပျဆောငျဖို့ အကောငျးဆုံး အခွအေနပေါ။ ဒီပွောငျးလဲမှုတှအေတှကျ ကောငျးသောအကြိုးရလဒျတှကေိုလညျး သခြောပေါကျခံစားရမှာ ဖွဈတဲ့အတှကျ အခုခြိနျက ပွောငျးလဲမှုတှေ လုပျဆောငျဖို့ အကောငျးဆုံးအခွအေနပေါ။
( ၃ ) ခဈြခွငျးတရား ( LOVE )
ဒီအခြိနျက သငျ့အတှကျ အခဈြရေးကံအကောငျးဆုံး အခြိနျအခါပဲ ဖွဈပါတယျ။ သငျ့မှာ ခဈြသူမရှိသေးဘူးဆိုရငျ အခုအခြိနျက သငျ့အတှကျ ခဈြသူရဖို့ အခှငျ့အရေးတှေ အမြားကွီးရှိနပေါတယျ။
ဒါကွောငျ့ ခဈြသူထားဖို့စဉျးစားထားရငျ အခုခြိနျက ထားဖို့အကောငျးဆုံးအခြိနျပါပဲ။ ခဈြသူရှိပွီးသားဆိုရငျလညျး သငျတို့နှဈယောကျက လကျတလောမှာ သာယာပြျောရှငျတဲ့အခဈြရေးလေးကို ပိုငျဆိုငျထားရမှာပါ။Credit
Perasaan akan memberitahu anda apa yang anda alami sekarang…..
Adakah anda ingin tahu apa yang anda alami sekarang?
Hari ini, saya akan menunjukkan kepada anda beberapa imej emosi, jadi mari pilih salah satu gambar kegemaran anda dan terokai perkara yang anda alami sekarang.
Anda hanya perlu lebih bersikap diskriminasi dengan bantuan yang anda berikan kepada orang lain. Jadi sekarang anda perlu melepaskan apa yang telah anda cuba lakukan, tidak kira apa pun cabarannya.
Kerana mereka adalah perkara yang pasti akan berjaya tidak lama lagi. Tetapi walaupun anda cuba mencapai matlamat anda, anda masih perlu berehat. Jadi jangan teragak-agak untuk berehat.
Anda perlu berfikiran positif tentang segala-galanya sekarang. Ini adalah masa terbaik untuk memikirkan matlamat anda dalam hidup. Adakah anda ingin membuat perubahan kerana anda tidak berpuas hati dengan kedudukan anda sekarang? Atau adakah anda berfikir untuk membuat perubahan besar dalam hidup anda?
Inilah masa terbaik untuk anda membuat perubahan. Sekarang adalah masa untuk membuat perubahan, kerana anda pasti akan mendapat ganjaran daripada perubahan ini.
Inilah masa terbaik untuk anda jatuh cinta. Jika anda belum mempunyai teman lelaki, terdapat banyak peluang untuk anda mendapatkannya sekarang.
Jadi sekarang adalah masa terbaik untuk meninggalkan orang yang anda sayangi. Jika anda sudah mempunyai teman lelaki atau wanita, anda mesti mempunyai hubungan yang bahagia sekarang. Kredit
Total Hits : 336258